Fanambarana Apple Pay Cash vaovao | Avy amin'ny mac aho
Fanambarana Apple Pay Cash vaovao
Apple dia nanambara ny Apple Pay Cash volana vitsivitsy lasa izay, fa hatramin'ny daty, mbola tsy nanao ny fanombohana ofisialy manerantany ireo tovolahy Cupertino. any Etazonia ihany no misy. Ity fomba vaovao ity dia hahafahanao mandefa vola haingana sy mora amin'ny alàlan'ny iPhone.
Saingy tian'i Apple fa rehefa misy izany serivisy izany dia fantatry ny mpampiasa Apple rehetra inona ity teknolojia ity ary mety hahasoa azy isan'andro?. Noho io haitao io dia afaka mandefa vola amin'ny kaontintsika Apple Pay any amin'ny kaonty Apple Pay isika ao anatin'ny segondra vitsy monja, nefa tsy mila mankany amin'ny banky hanao famindrana sy mandoa ireo kaomisiona izay matetika ampangaina amintsika, komisiona izay tena marina. tsy ambany izy ireo.
Apple Pay Cash dia misy any Etazonia, manomboka ny 5 Janoary, daty namoahana ny iOS 11.2, hamahana andianà olana tsy ampoizina mifandraika amin'ny rafitry ny finday Apple. Raha te hampiasa azy io dia tsy maintsy manana ny fanamarinana dingana roa ao amin'ny Apple ID, ankoatry ny carte de crédit na debit mifandraika amin'ny application Wallet, karatra iray izay tsy maintsy mifanaraka amin'ny Apple Pay.
Apple koa dia manome antsika horonantsary manazava izay anehoany amintsika ny fomba fiasan'ity teknolojia fandoavam-bola ity. Mba hahafahana manao fandoavam-bola na famindrana vola dia mila mandeha any amin'ny rindranasa Messages fotsiny isika, misafidy ny extension Apple Pay, safidio ny mpandray, ny vola ary kitiho raha handefa, toy ny hoe mandefa hafatra mahazatra izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Fanambarana Apple Pay Cash vaovao
HomePod miaro ny mombamomba anao manokana